Akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara Ụlọọrụ Federal nke Nchọpụta si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Ụlọọrụ Federal Bureau of Investigation
Ụlọọrụ Federal Bureau of Investigation
UK, US na-adọ aka ná ntị banyere 'ọrụ cyber ọrụ' Russia
Britain na United States na Monday mere ka nkwupụta okwu nkwonkwo dị mkpirikpi dọrọ aka ná ntị banyere "ọrụ ọjọọ cyber" nke Russia mere.
Ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ nnọchiteanya nke 32 na United States na-ekwu na ha na-ekerịta ihe na-akpali agụụ mmekọahụ
Ụlọ ọrụ US na Cambodia ejirila 32 chụpụ ndị mmadụ mgbe a kwusịrị ha na ha na-eketa ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ndị na-abụghị ndị na-akparịta ụka, ọtụtụ ebe ha maara ihe ahụ kwuru na Fraịdee.
Akuku Tokyo mepere obere okwu nke okwu Xi
Akuku Tokyo mepere Tuesday ka ndi oru ego na echere okwu nke President Xi Jinping na-ekwu okwu n'agbata Eshia n'etiti ahia ndi mmadu na United States.
Mgbasa mgbasa ozi ọzọ kọrọ na Texas
Otu ngwugwu gbawara n'isi ụtụtụ na FedEx na-ekesa nkata na Texas, akụkọ akụkọ na-ekwu, ụbọchị abụọ mgbe ọhụụ dị iche iche dị na Austin bụ ndị a tụrụ na bomber.
Abụọ merụrụ ahụ na Texas bombu, nke anọ n'ọnwa
Mmadụ abụọ merụrụ ahụ n'oge Sunday ka ọ gbawara n'otu ụlọ na Austin, Texas, bụ bọmbụ anọ dị egwu na obodo a na ọnwa a, ndị uwe ojii kwuru.
Otutu mwakpo igbu onwe onye n'okpuru oria ogwu - FG
Gọọmentị Federal kwuru na ọ na-eme ihe iji chịkwaa ọgwụ ụfọdụ, ebe ọ chọpụtara na ọtụtụ ndị na-egbu onwe ha na mpụ ndị ọzọ na-eme ihe ike n'okpuru ọgwụ ike.
Njem ndị nlekọta Donald na-eleta ndị lanarịrị Florida na-agbapụ, FBI na-ekweta na ọ gbapụrụ
Onye isi US President Donald na-aga na Friday gara ụlọ ọgwụ Florida ka ọ kasie ndị ahụ merụrụ ahụ n'ọgba akwụkwọ ụlọ akwụkwọ, mgbe FBI kwetara na ọ na-ekwu okwu banyere ndị nọ n'afọ iri na ụma na-echegbu onwe ha mgbe e gbusịrị mgbu nke 17 nwụrụ.
FBI n'okpuru ọkụ n'elu Florida ụlọ akwụkwọ agbapụ
Nrụgide na-arịwanye elu na FBI na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-emeghị ihe na-eme ka ụlọnga Florida na-enyo enyo na Nikolas Cruz nwere ike ime mwakpo.
Onyeisi FBI bụ James Comey na-akụzi usoro nduzi nke omume
Onye isi FBI director James Comey, bụ onye a chụpụrụ n'afọ gara aga mgbe ọ jụrụ ịkwado iguzosi ike n'ihe nye President Donald Trump, aha ya bụ Friday ka ọ kụziere otu ụzọ na nduzi ziri ezi na mahadum William & Mary.
Senate United States na-enyefe iwu iji mee ka NSA nyochaa wireless internet
Ụlọ ọrụ United States na Thursday nyefere ụgwọ iji mee ka usoro nlekọta onyunyo nke Nchebe Nchebe nke National Security Agency maka afọ isii na-enwe mgbanwe dị ntakịrị, na-emeri ihe mgbochi site na nnwere onwe obodo na-akwado na ọ mebiri nzuzo nke ndị America.
Onye na-enyocha Google Ex-Google bụ James Damore kwuru maka ịkpa ókè
Onye bubu onye ntinye akwukwo Google kpochapuru mgbe o kwuputara n'ebumnuche nke ihe kpatara ndu ndi ozo n'azu ulo oru ndi oru ugwo oru n'adighi nwoke na onye oru ya na Monday, na-ekwu na enwere ya oke dika onye na-acha oji nke nwere echiche ochichi.
US na-ekwu na Russia na-eme atụmatụ itinye aka na nhoputa nke 2018
The Central Intelligence Agency (CIA) Director, Mike Pompeo, kwupụtara nchegbu, na Sunday, n'ihi na ndị Russia kwuru na ha ga-etinye aka na 2018 n'etiti afọ ntuli aka US.
FBI na-enyocha Clinton Foundation - na-akọ
Ụlọọrụ Federal Bureau of Investigation na-achọ ntọala nke onye bụbu president Bill Clinton n'agbanyeghị nrụgide nke President Donald Trump na ebubo nke nrụrụ aka site n'aka ndị omekome Republican, United States kọrọ akụkọ Fraịdee.
Ndị ome iwu na United States na-achọ ntinye oge na nyocha usoro ịntanetị
Ndị isi Republican na Ngalaba Nnọchiteanya nke United States na-arụ ọrụ iji kwalite nkwado iji mee ka usoro nlekọta onyunyo gọọmentị nke National Security Agency dị nwa oge ruo n'itinye aka na nkwụsị ego, ndị ọka iwu kwuru.
Achọpụtaghị njide nke njide nke onye isi Innoson Innocent Chukwuma
Onye isi ochichi nke Economic Commission (EFCC), Mr. Ibrahim Magu, na Wednesday, gbara ọkụ na ala nke Senate, na njide nke Onye Nchịkwa Na-ahụ Maka Innoson Motors, Maazị Innocent Chukwuma.
Donald Trump criticizes FBI, na-ekwu enweghị mgbapụta maka Michael Flynn 'ma'
Onye isi mba United States, Donald na-agba na Fraịdee na FBI jụrụ ajụjụ banyere nkwekọrịta dị n'etiti Moscow na mkpọsa ya, ma jụ ịjụ ịgbaghara onye enyemaka mbụ Michael Flynn, bụ onye rịọrọ ikpe maka ịgha ụgha banyere njikọ ya na Russia.
Ndị Naijiria na-ejigide mba na United States maka nchịkọta email
Otu onye Naijiria mara ikpe ikpe afọ atọ na ọnwa ise n'ụlọ mkpọrọ site n'aka otu onyeikpe United States na Thursday mgbe ọ rịọrọ ikpe na ya ga-etinye aka n'itinye aka na email iji ragbuo ọtụtụ puku ndị e gburu na gburugburu ụwa nke nde nde dollar, ndị na-ekpechite ọnụ na United States kwuru.
Onyeikpe na-ahụ maka ikpe ziri ezi na United States na-ahụ maka ndị isi ụlọ ọrụ Clinton Foundation
Ngalaba ikpe ziri ezi nke United States jụrụ ndị ọkàiwu ka ha nyochaa omume rụrụ arụ na Clinton Foundation na ọgba aghara Obama-oge na-ere nke uranium ụlọ ọrụ Russia, dị ka akwụkwọ ozi NBC si nweta.